सुर्खेतकाे पन्चपुरिमा बृहत महोत्सव हुने, यस्ता छन् अाकर्षण | mulkhabar.com
March 17, 2019 | 10:34 am 77 Hits
सुर्खेत, ३ चैत – “पश्चिम सुर्खेतको एकता, आजको आवश्यकता! कृषि पर्यटन संस्कृति तथा खेलकुद प्रवर्धनमा हाम्रो प्रतिबद्धता!!”भन्ने मुल नाराका साथ सुर्खेतकाे पन्चपुरीमा महाेत्सव अायाेजना हुने भएको छ । चैत २२ देखि अायोजना गर्न लागिएको महोत्सबमा करिब डेढ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालीकाको बाबियाचौरमा सञ्चालन हुने सांस्कृतिक महोत्सवमा सर्वाधिक पुरस्कार राशिको भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको हाे ।
यहि चैत्र २२ देखि ३० गते सम्म आयोजना हुने पश्चिम सुर्खेत बृहत कृषि, पर्यटन, तथा सांस्कृतिक महोत्सवमा उक्त प्रतियोगिता हुने भएको हो ।
महोत्सबमा ¥याफ्टिङ्ग समेत सञ्चालनमा ल्याईने भएको छ । पञ्चपुरी ५ तिखाकुनादेखि भेरी र कर्णालीको दोभान त्रिवेणीसम्म एकहजार रुपैयाँमा ¥याफ्टिङ्ग अप डाउन गरिने समेत ढकालले बताए ।
करिब डेढ सय स्टल रहने मेलामा विभिन्न लघु, घरेलु , कृषी तथा पशुजन्य स्थानिय उत्पादनहरु समेत रहनेछन् । करिब ५४ लाखको खर्चको अनुमान गरिएको महोत्सबमा ५ करोड बराबरको कारोबार हुने आयोजकले अपेक्षा लिएकाे छ।